Cinga ngaphakathi kweBhokisi ene-Entrata Marketing Suite | Martech Zone
Cinga ngaphakathi kweBhokisi nge-Entrata Marketing Suite
NgeCawa, ngoFebruwari 7, 2016 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Abantu baseMelika baya bekhetha izindlu zokurenta njengoko inani lezibini ezitshatileyo ezinabantwana lincipha kakhulu kwaye iMillenials ikhetha ukuba ngabaqeshi bokuhamba, ukuthuthuzela kunye nezizathu zemali.
Ngomxholo wemillennials ogcwalisa imarike yerente, ayothusi into yokuba izifundo zamva nje zikufumene oko Iipesenti ezingama-74 zabantu abaza kuqesha izindlu bathatha i-intanethi besebenzisa izixhobo zabo eziphathwayo xa bekhangela izindlu zabo. Ukuthumela kwi-intanethi yeendawo ze-intanethi, ukulungiswa kwewebhusayithi yeselula, imidiya yoluntu kunye nokulawulwa kwegama elihle phezulu kwengqondo kubaphathi beendawo zokuhlala. Nangona kunjalo, indawo ehlala itshintsha amaxabiso eendawo zokuhlala, ukungena kwezithuba zabahlali kumajelo eendaba ezentlalo kunye neendawo zokuphonononga, kunye neendawo ezininzi ze-intanethi ezenze ukuba kube ngumsebenzi ongenakwenzeka kubaphathi ukugcina.
Indawo yokuThengisa ye-Entrata
Indawo yokuThengisa ye-Entrata sisisombululo esibanzi, esisekwe kwilifu esinceda ishishini leeflethi ukuba lilawule amaxabiso abo, igama labo, kunye nokuthumela kwabo konke ngelixa beqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi kwiiwebhusayithi zabo zepropathi.
Ukucinga ngaphakathi kweBhokisi
Abaphathi bepropathi banokufumana onke amanqaku kunye neenkonzo abazifunayo zokuthengisa ipropathi yabo ngaphakathi kweqonga le-Entrata. Akusekho mfuneko yokudala okanye cinga ngaphandle kwebhokisi kwiimfuno zabo zokuthengisa kuba iqonga lethu libenzela konke. Nantsi iminikelo:
Ithemba Portal ⓡ -Iiwebhsayithi ezenza uKuphakamisa okunzima
IthembaPortalⓡ Isisombululo esiphendula ngokupheleleyo kwiwebhusayithi esivumela indawo yokuhlala ukuba ibonise uluhlu lwazo lokurenta ngexesha langempela kwiwebhusayithi yabo. I-CMS ivumela ipropathi ukuba itshintshe iifoto, ingenise amagama aphambili e-SEO, yongeza umxholo omtsha kwaye utshintshele kuyilo olutsha lwewebhu ngokucofa nje okumbalwa kwideshibhodi ye-Entrata. Ukongeza, iisayithi zethu zibandakanya izixhobo zokuvelisa (ukudityaniswa kwekhadi leendwendwe, ukulinganiswa kunye nokuphononongwa, iindlela zokuqeshisa kwi-Intanethi, kunye nengxoxo ephilayo) ukunceda ukuguqula ukugcwala kwewebhusayithi ibe zezona zikhokelo.
Sinokulinganisa impumelelo yalo naluphi na uhlobo lweemikhankaso zentengiso esiziqhubayo, nokuba kungokusebenza kweinjini yokukhangela, ukuhlawula ngokucofa okanye kwiphulo lekhadi leposi. Ukusuka kwitrafikhi yewebhu, inani lamakhadi eendwendwe kunye namaxabiso okuguqula, iqonga lisixelela yonke into ekufuneka siyazi. UMeghan Hill, iGearal Real Estate, iipropathi eziyi-150 zisebenzisa iProspect Portal
Indawo ye-ILS™ -Ixesha lokuGcina, ukunciphisa ukuNgena kweDatha
Isiqwenga se-ILS Portal sedeshibhodi ye-Entrata ilawula yonke intengiso ye-intanethi yepropathi ngokutya okuzenzekelayo kuzo zonke iinkonzo eziphambili zoluhlu lwe-intanethi. Isusa kwangoko iiyunithi eziqeshiweyo kwaye ihlaziye zonke iisayithi ngalo naluphi na utshintsho olwenziwe kumaxabiso kunye nezinye iimeko zeyunithi.
Siphumelele kakhulu ekufumaneni zonke izithuba zethu kwiCraigslist kwaye sihlala ngaphezulu kweziphumo zokukhangela. Ukuthumela ngqo kwi-Craigslist ngaphandle kwesixhobo kwakunzima kwaye kuthatha ixesha, ke kwakunzima kubaphathi bepropathi yethu ukuthumela rhoqo njengoko besicelile. Ngoku, sifumana ukwanda kwetrafikhi kuzo zonke iipropathi ezisuka kwi-Craigslist ngenxa yayo. Amber Ammons, uMlawuli weNtengiso noQeqesho, kwiNkampani yePropathi yePropathi
Amaxabiso entrata™ -Ixabiso lasekunene, iCandelo lasekunene, Ixesha elililo
Iqhekeza lamaxabiso le-Entrata kwideshibhodi ye-Entrata lijonga yonke indlela yokuphila yerenti kunye nomhlaba okhuphisanayo ukuqikelela olona vavanyo luchanekileyo lokunyamezelana kwamaxabiso kwindawo yokuhlala. Abaphathi beehostele banokujonga idatha yamaxabiso kwi-interface enobuchule ngokufunda ngokulula iigrafu kunye neetshathi zokuqonda ngokukhawuleza ukuba kutheni kwaye njani amaxabiso ahamba.
Udumo kuMcebisi™ -Ukuchonga ukuba bafuna ntoni abahlali
I-ReputationAdvisor iqokelela uphononongo lwepropathi kwiwebhu yonke kujongano olunye kwideshibhodi ye-Entrata ekwabandakanya imithombo yeendaba yoluntu kunye nokujonga kwakhona inkqubo yolawulo lomxholo. Inkqubo yokunika ingxelo inceda ukulinganisa ukusebenza kwepropathi ngokuhamba kwexesha, kugxininisa ukomelela kweempawu kunye nobuthathaka.
Kutshanje i-Entrata iqokelele idatha kwiimbono kunye noqingqo-maxabiso lokuphononongwa kunye namajelo eendaba ezentlalo kubahlali abangaphezulu kwama-2,000 XNUMX.
Cofa apha ukuze ufunde isifundo esipheleleyo
SEO IiNkonzo -Ukwandisa ukubonakala, ukwandisa iTrafikhi
Sinikezela abathengi bethu ngazo zombini ubuchule be-SEO kwiphepha kunye nangaphandle ukonyusa ukubonakala kunye nokugcwala kwiwebhusayithi yabo. Ukongeza, iqela lethu libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zolawulo lwegama kwi-Intanethi ezibandakanya yonke into ekudaleni umxholo wokuqala ukuya kudibanisa iphepha lepropathi kunye neendawo zeendaba ezaziwayo.
UMphathi weNkokeli -Akukho Nkokheli ishiye ngasemva
ILeadManager idibanisa zonke izithuthi zekhadi labatyeleli kwideshibhodi ye-Entrata. Iqulunqa kwaye iququzelele yonke ipropathi ekhokelela kwimithombo nokuba kukungena-ukungena, ukufowunelwa, okanye imibuzo ekwi-Intanethi ukubonelela ngokulandela ngokulula kunye nokulandelela imbalelwano kunye nezikhokelo. Ngazo zonke izithuthi ezihamba phambili kunye nokwenza ingxelo ezifakwe kwindawo enye, iipropathi ziyakwazi ukunxibelelana nezinye izikhokelo, ukuthelekisa iziphumo, kunye nokwenza izigqibo ezifanelekileyo apho uchithe khona ukuthengisa iidola.
tags: abaqeshisi bezindluukungenaIndawo yokuthengisa engenayolkungokuumphathiulawulo lwepropathiintengiso yolawulo lwepropathiithemba portalithembaizindlu ezithengiswayoukuthengisa umqeshiamaqhinga erenterentersmcebisi
Iindlela ezi-5 zoVavanyo lweeVidiyo ezonyukayo zonyusa ukusebenza ngokukuko kweNtengiso